Oghere Ibu Ụzọ PVC Cold Storage Doors China Manufacturer
Nkọwa:Ọnụ ụzọ nchekwa oyi,PVC Cold Storage Doors,Oghere na-ekpuchi ikpuchi
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ụlọ Nri Igwe Nchekwa Ọnụ > Oghere Ibu Ụzọ PVC Cold Storage Doors
Ihe Nlereanya.: CD-01
Ịme mkpuchi na ike ịchekwa ụzọ dị n'ime ụlọ ngwa ngwa maka mpaghara mpaghara ngwa ngwa ngwa ngwa
Na-enyere aka ịzọpụta ike, na-ebelata ikuku ikuku, ma belata mkpọtụ.
Uche dị nro na-echekwa ihe nchekwa dị mfe ma jiri ya rụọ ọrụ iji kpochapụ ngwaọrụ iji mee ka ọrụ dị mma ma rụọ ọrụ nke ọma na gburugburu ebe obibi dị ala. Ọdịdị ahụ jikọtara ọrụ nke mgbochi nkwekọrịta mgbake. Mgbe a na-etinye ahụ ahụ n'ahụ n'ụzọ na-enweghị isi, ọ na-apụ na egwu ahụ ma na-emezigharị ntụrụndụ ahụ n'oge na-arịgo. Ọdịdị a abụghị nanị na-enyere aka ahụ aka ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu ma dị mma, kama ọ na-arụ ọrụ ihe karịrị ugboro 150,000 kwa afọ n'enweghị ọdịda. Ọ na-agbatị ndụ nke ngwaahịa ahụ ebe ọ na-ebelata ihe mgbakwụnye ihe na nrụzi ọrụ.
Na-egwu ihe na-eme ka a ghara ime ihe
Nhazi na ngwa nke usoro oku a na-egbochi na-arụ ọrụ nke ahụ ụzọ, na-eme ka arụ ọrụ dị ike na arụ ọrụ arụ ọrụ nke na-arụ ọrụ na ebe okpomọkụ dị ala. N'otu oge ahụ, ọ ga-ekwe omume ịwụnye ma wepu ihe ngwa igbe dịka mkpa, ma kwenye okpukpu abụọ na arụ ọrụ nke ngwaahịa ahụ na gburugburu ebe okpomọkụ.
N'ọnọdụ nke mmetụta mberede, enwere ike ịmepụ ákwà mgbochi ahụ ma weghachite ya mgbe ọ na-agbago, na-enweghị nhazi ntughari na nchịkọta nhazi.
Ịgba ọsọ 0.6-2.5M / S, na enwere ike ịtọ
Ịgba ọsọ 0.6-1.2m / S, na enwere ike ịtọ
A na-agbakwunye ihe nchebe gburugburu ebe obibi nchedo gburugburu ebe obibi na polyester fiber na-akwagide na etiti. Okpokọta nke ogho anụnụ anụnụ na akwa ákwà dị nro abụghị ihe na-erughị 1mm. Ike n 'ike dị elu ma na-adịsi ike. Ihe ngebichi agagh adi ka igbanye oku eletrik na-acho uzuzu. Debe ihe mkpuchi ihe. Okpomọkụ dị mma: -30 ~ + 70 ° C.
A na-eji igwe na-acha nchara anụ na galvanized na-egwu, na elu bụ ihe a kpochara iji gbochie nchara.
Oghere ụzọ nchebe mkpuchi
Igbe nchịkwa na components ndị ọzọ ga-ezute IP54 na n'elu, na izute iwu nchebe eletriki mba, ọbụna na mpaghara ọjọọ nwere ike ịbụ mmiri na-ekpuchi mmiri.
Ụlọ ọrụ mmepụta ụlọ ọrụ HOFIC bụ ọkachamara na-agụnye: moto dị elu maka ọnụ ụzọ ngwa ngwa, ike 220V, ike 0.75kw / 750 rev / S, na-ebu ụdị S4 nnukwu ibu. Ọnwụ nke usoro ígwè ígwè; mmebi; akwụkwọ ntuziaka ntọala; ngwaọrụ nkwụnye ọkụ, wdg.
1, ike karịrị ibu dị ike, n'oge ụfọdụ, mgbanwe ahụ nwere ike ịrụ ọrụ karịa ugboro 2000 n'ụbọchị.
Ntụle mkpebi dị elu nke mkpụrụedemede 2,2000 na àgwà nzaghachi ngwa ngwa nke moto ahụ na-ezere nsogbu nke njehie na-ezokarị.
3. Ntughari ntuziaka ntuziaka nwere ike ịtọhapụ ya n'oge mmejọ ma ọ bụ ike ọdịda, ma meghee ọnụ ụzọ ma ọ bụ mechie iji nwee ọnọdụ dị mma.
1. Usoro ahụ na - egosiputa ọrụ mmejọ site na ọkụ tube;
2, nchebe nchịkwa: mgbe ejikọtara okporo ụzọ ụgbọala mgbagwoju anya, onye nchịkwa ahụ kọọrọ ya njehie ozugbo, ọnụ ụzọ adịghịkwa agagharị;
3, mgbanaka torsion, mgbanaka ọnọdụ ahụ, mgbanaka ọsọ na atọ yiri mgbaaka na-emechi kpamkpam;
4, nke nwere ike ịrụ ọrụ nkwado, na-enweghị ihe mgbochi akụrụngwa electromagnetic, a pụrụ ịkwụsị moto ahụ n'ọnọdụ ọnọdụ a na-atụ anya ya, nke mere na ọnụ ụzọ ahụ kwụsịrị na njedebe
Ngwaahịa ọnụahịa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa eji agba mmiri Kpọtụrụ ugbu a
Automatic elu ngwa ahịa nchekwa ụlọ ọrụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa PVC ọhụụ maka ụlọ ọrụ nri Kpọtụrụ ugbu a
Nrụpụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa igwe na-agba egbe Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ ụzọ nchekwa oyi PVC Cold Storage Doors Oghere na-ekpuchi ikpuchi Ọnụ ụzọ nchekwa Aluminom Ọnụ ụzọ nhazi Ọnụ ụzọ Mmezi Nchekwa onwe Ọnụ ụzọ nchekwa nchekwa PVC Ọdụ Coldzọ Nchekwa Oyi